Okokwenza e-Tshukudu Bush Lodge
Umbono jikeleleIndawo yokuhlalaIsabeloUkukhwishiza
Ngibheke phambili emisebenzini emihle yokubukela umdlalo ngenkathi usohambeni eduze kweSun City ePilanesberg National Park.
ala usuku lwakho e-Tshukudu Bush Lodge nge-drive ejabulisayo yemoto. Ezinye zezilwane zasendle zase-Afrika ongazibheka zihlanganisa i-Big Five - okungukuthi ingonyama, ubhejane, ingwe, indlovu nezinyosi. Izivakashi ezithe xaxa zingajabulela ukuhamba kwemidlalo eqondiswayo ePilanesberg National Park.
Buyela e-Tshukudu Bush Lodge ngenti ephakeme kakhulu. Sebenzisa i-ntambama efudumele egijima ilanga noma ngokuzibhukuda okuqabulayo echibini elithambile edwaleni. I-Tshukudu Bush Lodge inomtapo omncane onenombolo ekhethekile yezincwadi okufanele ufunde ngo-ntambama ngokuthula.
I-Sun City Tour
Thatha uhambo oluya eSun City eliseduze nalapho ungakujabulela umdlalo wegalofu. Buka umbukiso kwenye yezindawo zokuzijabulisa ezibukhoma noma zama inhlanhla ekhasino. I-Sun City iphinde inezilimo zasendle. Imisebenzi eyengeziwe ihlanganisa ukuvakashela ukugibela i-Aviary kanye nehhashi.
Zama ukudla kwasekuseni okunethezeka kwe-Continental ekuseni njalo ekhoneni elibukeka kahle elibukwayo. Jabulela itiye eliphezulu ntambama noma ukudla kwasemini ngaphambi nje kokudlala kwakho okuthakazelisayo. Isidlo saseThuthudu Bush Lodge siyisipiliyoni esikhethekile, sithokozela ukudla okwe-Afrika emlilweni oqhakazile noma ekamelweni lokudlela esiseduze.
Buyisela Emuva - Isabelo